» TOOS: Musharaxiin Gaaray Hoolka Doorashada Balse Musharaxiin Caan ah oo ku shirsan Hotel Jaziira…Badweyntimes.com
TOOS: Musharaxiin Gaaray Hoolka Doorashada Balse Musharaxiin Caan ah oo ku shirsan Hotel Jaziira…
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in musharixiinta ugu badan ay ku shirsan yihiin mid kamid ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho.
Musharixiinta ayaa doonaya inay mideeyaan codadkooda ka hor doorashada manta ka dhaceyso magaalada Muqdisho, oo ay ku tartamayaan Musharaxiin badan.
Xalay ilaa habeen hore waxaa magaalada Muqdisho ka socday kulamo kala duwan oo lala yeelanayay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasi oo codadkooda la doonayo.
Saacado kadib ayaa waxa amagaalada Muqdisho ka bilaabanaya doorashada madaxweynaha Soomaaliya, waxaana Caasimada Online ay toos idiinku tabin doontaa doorashada maanta.
« Warbixinta Ka HoreysayDEG DEG:Heshiis cusub oo Xasan Looga adkanaayo doorashada oo hada kadhacay Muqdisho
Warbixinta Xigto »LIVE: Dhamaan Musharaxiinta oo iska Xaadiriyay Xaruunta Doorashada & Jawaari oo ku dhawaaqaya…